Kansarka: Wuxuu la dagaallamaa xaaskiisa si uu u helo dhuux laf-beel ah - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Cancer: Wuxuu la dagaallamaa xaaskiisa si uu u helo dhuux laf-beel ah
Isagu wuxuu rabaa in uu badbaadiyo nolosha xaaskiisa oo leh leukemia oo u baahan caawimo dhuuxa lafta Si siman, sidaas Olivier wuxuu sameeyey racfaan. Tan iyo markaas, asxaabtiisa, asxaabtiisa, laakiin sidoo kale qarsoodi ah ayaa ka jawaabay. In Saint-Étienne (Loire), Ururka Dhiigga Faransiiska (EFS) ayaa ka badan musharaxiinta, gaar ahaan bilayska oo ka jawaabay codsiga Olivier, isaga oo ah sarkaal bilays ah oo Roanne (Loire ).
"Waxaan dhamaanteen nahay seddexda, waxaanan rabaa in badan, waa adag tahay"ayaa sheegay in Olivier oo xannaaneeya labadooda carruur ah halka Jennifer uu ku dagaallamayo cudurka. Iyada oo shaashado, laga bilaabo qolkeeda qallafsan ee Machadka Kansarka ee Loire, hooyadu waxay maamushaa in yar la wadaago nolol maalmeedkooda. "Si aad u seexato, aad ayay muhiim u tahay. Waxaan sheekada habeenkii wada dhignaa "ayuu yidhi Jennifer, oo rajaynaya inuu sugo iyo inuu helo ruux wanaagsan.
Mawduucyada kale ee JT
Si aad u aqriso
Fekerkaaga waa qiimo.
Naga caawi in aan hagaajino boggayaga adigoo ka jawaabaya su'aalaheena.
Waxaan dhiibaa fikradayda
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/don-d-organes/cancer-il-se-bat-pour-que-sa-femme-ait-une-greffe-de-moelle-osseuse_3274393.html